Volkswagen Polo 2012 (#530853) ကို Yankin မြို့နယ်တွင်ရော... | CarsDB
2017-05-25 11:57:44 +0630
စတိ (Bgo လိုင်စင်)
1200 Cc (TSI turbo)
Grade 4, Best Condition.
2012 မှာ top 10 စာရင်းဝင် hatchnack ကားလေးပါ။ 1.2 သာပြောတယ် ကားအရမ်းမောင်းကောင်းပါတယ်။ အောက်ပိုင်း အတွင်းခန်း အပြင်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အရမ်း သေသပ်လှတဲ့ ကားကောင်းလေး တစ်စီးရောင်းပေးခြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသက်သာဆုံးဈေးဖြင့် ပေးပါမည်။
- kilo 5****
- Semi-Auto (7 speed)
- Pw, Ps, ABS, back wiper,TV
Price: 178 သိန်း
ph: 095107983, 09421135442, 09780640108.
Lot Number: #530853